Uyini icala eliphezulu futhi aphansi on the ikhibhodi?
Emhlanganweni wethu wokuqala ngekhibhodi abasebenzisi imfundamakhwela ngokuvamile kuphakama umbuzo: "Uyini icala eliphezulu futhi aphansi on the keyboard," It kuvela ukuthi konke silula. icala Upper kubonisa ukuthi ngesikhathi esithile langena kusukela ikhibhodi bofeleba kanye aphansi, ngokulandelana - ezincane. Okungukuthi, wonke umusho iqala ngohlamvu capital. Ngenxa yalesi usonhlamvukazi ukusetshenziswa. Ezinye izindaba zika-isiphakamiso - izinhlamvu "ezincane", ukuthi isetshenziswa ephansi irejista. Lokhu kuyinto impendulo yombuzo lokho okubhalwa engenhla nengezansi ikhibhodi. Kunezindlela ezahlukene inguquko phakathi kwamamodi okufakwayo, okuzokwenza manje kucatshangelwe.
Manje siyazi ukuthi irejista engenhla nengezansi ikhibhodi. Ake ukubhekana izindlela eziyisisekelo ushintsha phakathi izinhlamvu "esikhulu" futhi "ezincane". Kukhona yesikhathi esifushane neyezinto usuke unomphela. Enye indlela software ukusebenza kule isofthiwe ehhovisi. Luphinde kubhekwe njengengxenye le nto. Ake uqale nge short-term. Kwikhibhodi computer ngamunye onesihluthulelo «Shift» (ezinye zazo esikhundleni sokubhala inkulumo ingaboniswa umcibisholo waphezulu). Uma amakepisi, ngokucindezela le nkinobho lihambisana yimuphi uhlamvu alphanumeric yena avele ezincane iphathwa aphila ngesikhathi esithile, futhi okuphambene nalokho. Le ndlela kuyasiza ukuqala umusho. Okungukuthi langena izinhlamvu usonhlamvukazi, bese zonke othayiphiwe isivele string format.
Upper nezincane kungenzeka esitshalweni ngenye indlela. lapho «Caps Lock» ukhiye ekhethekile le njongo. Ivame etholakala emgqeni kwesokunxele kwekhibhodi phakathi okhiye «Tab» futhi «Shift». Lapho sicindezelwe, kukhona shift irejista njalo. Ukuze sithole imodi samanje ebuka LED ikhibhodi iyona Umbhalo ofanayo - «Caps Lock». Uma kuvuliwe, kusho ukuthi efakiwe ofeleba, kungenjalo - ezincane. Ukushintshela ku Imodi eyodwa kuya kwenye cindezela ikhi futhi. Le ndlela engcono esetshenziswa uma udinga njalo ukuthayipha ngefomethi efanayo (isib, izinhlamvu ezincane kuphela), futhi ushintsha phakathi ifomethi input, futhi uma kukhona, akusiyo ezivame kangaka.
Ukuthola izinhlelo zokusebenza ehhovisi
Enye indlela yokushintsha izinhlamvu usonhlamvukazi kanye ezincane yaqaphela suite ehhovisi lenkampane «Microsoft». Ngokuvamile-ke isetshenziswa ukusebenza amagama "uLizwi." Uma ufaka wena ukhohlwe ngephutha hamba kusuka kakhulu izincwadi ezincane noma okuphambene nalokho? Usonhlamvukazi kanye ezincane kuleli cala kungashintshwa kanje. Khetha wayefisa umbhalo isinqamu noma ngokusebenzisa inkinobho yesinxele noma usebenzisa «Shift» futhi isikhombisi okhiye. Okulandelayo kubha yamathuluzi "Ekhaya" ukuthola lesi sigatshana "Ifonti". It has a inkinobho yokushintsha irejista. Kubonisa a esikhulu incwadi encane "a". Chofoza ngayo kwesokunxele igundane inkinobho esisodwa. Fall imenyu, lapho kudingeka ukhethe into kithi. Ngokwesibonelo, uma ufaka usonhlamvukazi kanye ezincane ezidingekayo, bese ukhetha into "Shintsha Case" noma "zonke izinhlamvu ezincane". Kungakhathaliseki ukuthi iyini imiphumela yokhetho ngeke lifane - zonke izinhlamvu Ukukhetha kuyoba "ezincane". Le ndlela ingasetshenziswa kuphela suite ehhovisi lenkampane "Microsoft" futhi kuphela umbhalo singenelwe computer.
Kulesi sihloko, sibe siphendula umbuzo yini irejista engenhla nengezansi ikhibhodi. Futhi inikeza inkinobho eziyisisekelo phakathi izinhlamvu usonhlamvukazi kanye ezincane. Omunye, kahle ichazwe ngendlela ukusebenzisa it is hhayi Kunconywa - kuyonciphisa kakhulu umkhiqizo umsebenzi. Kungcono ukuhlanganisa kubo bese, kuye ngokuthi isimo, sebenzisa iphuzu elilodwa noma ezinye.
Nvidia GeForce 9600 GT: Imininingwane Uhlolojikelele
Musa ukufometha flash idrayivu NTFS: izimbangela futhi ukuxazulula le nkinga
Indlela yokulawula igundane ngaphandle igundane? Indlela ukulawula ikhompyutha ngaphandle igundane?
Londoloza isikhathi nezinzwa, noma indlela yokumisa router D-Link?
Shure SE215: Ukubuyekeza embobeni Izibuyekezo
Ukwakhela eqenjini amadala lephepha: ukuthuthukisa ukucabanga lubandlululo kanye zokudala
Yikuphi ithebhulethi kufanele ezithathwe abesifazane abakhulelwe?
"Bardal" (uwoyela): ukubuyekezwa, umakhi, amanani. Izibuyekezo Real lamafutha injini "Bardal"
UMzila Diablo 3: avelele
Umshuwalense kanye uxhaso ingxenye yempesheni - yezingxenye eyinhloko ekuphakelweni kwesive